Soosaarayaasha Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha - Warshad Maamusha Helitaanka Shiinaha
WL8200-I1 802.11ac Gudaha D ...
Taxanaha DCFW-1800 Gener Next ...
DCRS-7600E Taxanaha Laye Core ...
WS6000-M500P6 Xakamaynta Isku-xirka Sirdoonka ee Sirdoonka
WS6000-M500P6 waa kumbuyuutar kumbuyuutar badan oo adeeg ah kaas oo isku daraya xaqiijinta, maareynta shabakada iyo xakamaynta barta helitaanka wireless, oo ay ku jiraan maareyn sahlan, dayactir ku habboon, awood ballaaran iyo waxqabad sare. Waxaa loo habeeyay shabakad yar yar iyo mid dhexdhexaad ah, waxay maamuli kartaa ilaa 512 dhibic marin (AP). Iyada oo adeegsiga cusub ee shaashadda desktop-ka iyo qaabka naqshadeynta, WS6000-M500P6 ay fududahay in la shaqeeyo oo sahlan in la ilaaliyo lana geeyo, taas oo si wanaagsan u qancin karta macaamiisha ...
DCWS-6028-C Smart Access maamusha
DCN DCWS-6028-C waa jiil cusub oo waxqabad sare leh 10G xakamaynta wireless wireless. Waxaa loogu talagalay jiil cusub oo shabakado xad-dhaaf ah oo xawaare sare leh, waxay maamuli kartaa illaa 256 goobood oo laga heli karo fiilooyinka (APs) waxayna ku habboon tahay shabakad yar-yar iyo dhexdhexaad dhexdhexaad ah. DCWS-6028-C waxay isku daraysaa maareynta xakamaynta isticmaale ee saxda ah, maareynta RF kaamil ah iyo farsamooyinka amniga, super QoS iyo qulqulatada aan xadka lahayn, iyadoo siineysa shaqooyinka xakamaynta marin u helka WLAN awood badan. DCWS-6028-C waxay leedahay lakab buuxa 3 xiiso leh oo furaha ...
DCWS-6028 (R2) Xarkaha iyo Fiilooyinka Isku-dhafan ee Isku-xirka Smart Access
DCWS-6028 (R2) waa kumbuyuutar hawleed heer sare ah oo heer sare ah oo laga helo (AC) oo loogu talagalay shabakadaha wireless-ka ee dhexdhexaadka ah, kaas oo maamuli kara ilaa iyo 1024 dhibco marin (APs). Waxay bixisaa maareyn RF dhameystiran iyo farsamo amni, QoS awood leh, qulqulatooyin aan xaddidneyn iyo xakameyn buuxda oo AP ah, ayaa loo isticmaali karaa in lagu dhiso shabakad dhexdhexaad ah oo loogu talagalay xerada, hudheelka, xafiiska ganacsiga, isbitaalka, iwm. Qalabka ASIC, DCWS-6028 (R2) ) wuxuu taageeri karaa gudbinta qadka-safka ee xirmooyinka xogta IPv4 / IPv6 wuxuuna taageeri karaa dariiqa firfircoon ...